Tag: fanatsarana pejy | Martech Zone
Tag: fanatsarana pejy
Na dia maro aza ireo masoivohon'ny varotra nomerika mifantoka amin'ny marika, famolavolana ary ny zavatra iainan'ny mpanjifa fotsiny, indraindray izy ireo dia tsy ampy amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana (SEO). Tsy midika izany fa tsy afaka hahomby amin'ny mpanjifany izy ireo - matetika izy ireo. Saingy midika izany fa ny fiverenan'izy ireo dia matetika tsy mahafeno ny fahafaha-manao feno hahazoana orinasa vaovao. Ny fikarohana dia tsy mitovy amin'ny fantsona hafa satria ny mpampiasa dia mampiseho tena fikasana hividy. Doka hafa sy sosialy